Sirta Ka Danbeysaa Dagaalka u Dhexeeyo Pelle VS Maradona - iftineducation.com
Sirta Ka Danbeysaa Dagaalka u Dhexeeyo Pelle VS Maradona
aadan21 / June 5, 2012
Pelle Vs Maradona
iftineducation.com – Halyeyga kubada cagda brasil Edilson Arantes do Nascimento oo lagu naaneeso Pelle ayaa waxow fashilay sirta ka danbeysa dagaalka u dhaxeeyo asaga iyo halyeeyga kubada cagta ee Argentina.
Waa ka fogtahay sida loo maleynaayo. Pelle wuxuu yiri dagaalka afka ee saxaafada isku marsiiyaan uu yahay kaliya kaftan.
labadaan halyeey ee kubada cagta adunka ayaa waxey saxaafada isku marsiiyaan dagaal afka ayagoo midba midka kale uu liidaayo. Pelle si daran u difaacaya Nyemar da Silva. halka Maradonana uusan ka daaleynin inuu difaaco Lionel Messi, xidiga Barcelona.
Laakiin dagaalka komentarka ee u dhaxeeyo labadaan halyey ee kubada cagta aduunka waa madadaalo qura. Pelle ayaa wuxuu cadeeyay in xariirka asiga iyo Maradona fiicanyahay.
Dieguito (Maradonna yar) waa is jecelnahay, “ayuu yiri Pelle, sida lagu daabacay
Claim, Axadi (3/6/2012).
anaga si joogto ayaan u kulanaa waana wada baashaalnaa, waxaas oo idil waa kaftan. Xariir keena aad ayuu u wanaagsanyahay.
Pelle ayaa Brasil Laqaaday sadax jeer Koobka aduunka (1958,1962,1970) waxowna
usaftay 1361 kulan una dhaliyay 1281 gool . (Aden)
Moh Farah oo Orod Ku Guuleystay
Nin Hubaysan oo Nin Soomaali ah ku dilay Magaalada Toronto ee Dalka Canada iyo Booliska..(Daawo Muuqaal Ahaan)